Nepal’s recent history of development is marred byaparadox. Many countries in the world have experienced rapid growth but modest poverty reduction, as income has increasingly concentrated in t...
Vikrant Bhatt 1.5k 0
गल्ती भइसक्यो, घटना ढाकछोप होइन निष्पक्ष छानबिन गर...
सभामुख महराको बलात्कार प्रमरणमा पटक-पटक गल्ती भएको छ । पहिलो- रातिको समयमा एक महिलाको डेरामा मदिरा लगेर जानु, दोस्रो- आफू आइतबार दिउँसो २ बजेपछि कहीँ नगएको र समाचार भ्रामक हुन भनेर खण्डन गर्नु, तेस्रो...
अब सरकार सरकार रहेन् । दसैं खर्च माग्‍न हरेक वर्ष काठमाडौं आउने राउटेलाई प्रधानमन्त्रीले भेट त दिएनन् नै रित्तो हात फर्काए । चैतको हुरीले घरबार बिहीन भएकाहरु खुला आकाशमुनी दसैंको दियो बाल्न बाध्य छन्...
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र सरकारको ‘उत्ताउ...
काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ यही असोज महिनाको अन्तिममा नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको छ । तर, औपचारिक घोषणा नहुँदै सरकारका कतिपय मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरुले नै मिति सार्वजनिक गर्दै हिंडेपछि त्य...
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र सरकारको ‘उत्ताउलोपन’
संविधान दिवसमा भीड जम्मा गर्ने र 'वार्गेनिङ अस्त्र...
संविधान दिवसमा तामझाम र उर्दी होइन संविधानको प्रयोग र संवैधानिक अभ्यासमा परिपक्वता, पारदर्शिता र स्पष्टता आजको आवश्यकता हो । संविधानको अपव्याख्या एवं आफ्ना अनुकूलको व्याख्याले संविधान बलियो हुन सक्दैन...
सरकारको थाप्लोमा थपिँदो ऋणको भार, यसरी मुलुक कसरी...
वर्षेनी नेपाल सरकारको थाप्लोमा ऋणको भारी थपिँदो छ । अहिले नेपाल सरकारलाई १० खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको ऋण छ ।
सरकारको थाप्लोमा थपिँदो ऋणको भार, यसरी मुलुक कसरी लाग्ला पार
जनतालाई 'कुकुर' को संज्ञा दिएका पर्यटनमन्त्रीको नि...
मन्त्री भट्टराईलाई सत्ताको उन्मादले छुन लागेको महसुस जनताले गरेका छन् । तर, जिम्मेवार र गम्भीर हुन जरुरी छ । उनी एक जाँगर भएका युवा नेता हुन् । उनी थुप्रै युवाका भरोसाका पात्र हुन् । युवाको भरोसा गुम्...
लामो समय देखि बिबादबाट गुज्रिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सुचारु हुने भएको छ ।
Suvadin Media 437 0
रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाहको पालादेखि सुरु भएको बाल...
काठमाडौं- ‘सुनिश्चित बाल अधिकारः समृद्ध नेपालको आधार’भन्ने नाराका साथ आज बाल दिवस मनाइँदैछ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालअधिकार महासन्धिलाई २०४७ साल भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको थियो ।...
Suvadin Media 334 0
रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाहको पालादेखि सुरु भएको बालदिवस औपचारिकतामा मात्र सीमित
एकपटक एक साधुले ती दुई दाजुभाइबारे धेरै कुरा सुने । दुवै दाजुभाइको स्वाभावबारे सुन्दा उनलाई अनौठो लाग्यो । उनलाई यसको रहस्य जान्ने उत्सुकता जाग्यो । उनी सोधखोज गर्दै दाजुको घरमा पुगे । रक्सी पिउँदै गर...
Sb Saud 300 0
काश्मीर मामिलामा नेपालले सचेतता अपनाउन जरुरी !
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खानले सेनालाई सतर्क रहन भनेका छन् । भारतले सोमबारदेखि नै काश्मीर क्षेत्रमा दशौं हजार सेना परिचालन गरेको छ । नेपालका लागि दुबै मुलुक उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । असंलग्न परराष्ट्...
DilipKarki 429 0
प्रेरक प्रसङ्ग: जिन्दगीमा मौका कहिले आउँछ, त्यो भन...
आइन्सटाइनको मन्तव्य ध्यानपूर्वक सुनिरहेका एक विद्यार्थी बीचमै आफ्नो सिटबाट अचानक उठे र हात उठाए । आइन्सटाइनले उनलाई देखेर बोल्ने मौका दिए । विद्यार्थीले प्रश्न गरे– हजुरले भनेजस्तो मौका हाम्रो जिन्दगी...
Sb Saud 432 0
प्रेरक प्रसङ्ग: जिन्दगीमा मौका कहिले आउँछ, त्यो भन्न सकिन्न
भक्तपुरमा आज धूमधामकासाथ घण्टाकर्ण पर्व मनाइँंदै,...
टोलबासी मिलेर साँंझ टोलटोलमा गथांमुग बनाएपछि त्यसलाई बोकेर दाहसंस्कारका लागि लिएर गएका हुन्छन्। सहभागी बाँंकी सयौंले छ्वालीको राँको बालेर दाहसंस्कारमा सहभागी भएका हुन्छन्। यस क्रममा उनीहरुले अश्लिल भा...
Sb Saud 537 0
प्रेरक प्रसंग: बुद्धको अन्तिम दिन
बुद्ध जतिजति तरकारी खाँदै गए, उतिउति उनको शरीरमा जंगली च्याउको विष फैलिँदै गयो । अन्ततः उनको स्वास्थ्य निकै खराब भयो । उनलाई उपचारका लागि वैद्यकहाँ पुर्‍याइयो । वैद्यले बुद्धको अवस्था बुझिसकेपछि उनीसि...
Sb Saud 428 0
विपत्तिले विचल्ली, संवेदनाहीन व्यवहार र जोखिम न्यू...
बाढी, पहिरो र डुबानमा परे गत वर्षभरी भएको मानवीय क्षति यस वर्षको एक हप्तामा नै भएको छ । गृहमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार बुधबारसम्म बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या १०८ जना पुगेको...
साउन, शृंगार र अध्यात्म : किन बस्छन् महिला नै व्रत...
हामीले जीवनमा जति भागदौड गरे पनि, जति बुद्धिमत्ता अपनाएर आफूलाई उच्च कोटीको मनुष्यमा राख्न चाहे पनि हाम्रो खास उद्देश्य मनुष्य जीवनलाई खुसी र आनन्दका साथ जिउनु हो । आफूखुसी आनन्द चाहनेले अरूको लागि पन...
DilipKarki 424 0
लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी पछिल्लो असमावेशी विज्ञापनले नेपालमा फेरि आरक्षण बहस चर्किएको छ। सर्वोच्च अदालतले लोकससेवा विज्ञापन नरोक्न आदेश दिएपछि फेरि आरक्षण र समावेशी कोटाको बहस चर्किएको हो...
DilipKarki 666 0
'लाचार र दुखी' प्रधानमन्त्रीबाट सुखी नेपालीको सपन...
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय नाराको लक्ष्य प्राप्तिको यात्रामा हिँडेको शक्तिशाली सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली आफैं दुखी र लज्जित बनेका छन् । अहिले सिंगो नेपाल र नेपाली जनत...
DilipKarki 465 0
वर्षा नै धान्‍न नसक्‍ने मुलुक र ठोस समाधान गर्न नस...
एकातिर हामी समृद्धि र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानमा छौं । सोही अभियानअर्न्तगत २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र मुलुकमा विदेशी डलर भित्र्याएर रातारात कायापलट गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । अर्कातिर चारदिनसम...
DilipKarki 819 0
प्रेरक प्रसङ्ग: इमानदारीको मूल्य
तलासी सुरु भयो । कसैबाट रकम फेला परेन । बुखारीको पालो आयो । जहाजका कर्मचारी र अन्य यात्रीले भने– तपाईंमाथि शंका गरेर तलासी लिनु नै अपराध हो । तपाईंको के तलासी लिइरहनु रु यो सुनेर बुखारीले भने– हैन, है...
Sb Saud 384 0
'हरेक दिन, शुभ दिन'
हुन त हरेक दिन शुभ नै हुन् तर कुन दिन के काम गर्नु शुभ हुन्छ भनी धेरैमा जिज्ञासा रहन्छ । ज्योतिषमा प्रत्येक कार्यका लागि शुभ मुहूर्त निर्धारण गरिएको छ । तर तपाईंलाई शुभ मुहूर्तका बारेमा थाहा छैन भने द...
Sb Saud 564 0
सन्दर्भ- धान दिवस : गोरुको पुच्छर समातेर यान्त्रीक...
आइतबार देशभर असार १५ अर्थात राष्ट्रिय धान दिवस मनाइयो । 'धान खेतिमा प्रविधि र यान्त्रिकिकरण, चामल आयातमा न्यूनीकरण' भन्‍ने मूल नाराका साथ १६ औँ धान दिवस मनाइयो । यस अवसरमा कृषि मन्त्री चक्...
DilipKarki 440 0
सन्दर्भ- धान दिवस : गोरुको पुच्छर समातेर यान्त्रीकरणको नारा कति सार्थक होला ?
तराईको चर्को गर्मीले उनलाई सास फेर्न पनि कठिन हुँदै गएको थियो । उनको साथमा पानी थिएन । पानीको खोजीमा यताउता भौँतारिँदाभौतारिँदै उनले एक सात–आठ वर्षकी बालिकाले इनारबाट पानी निकालिरहेको देखे ।
Sb Saud 392 0
'पतञ्जलिको जन्म भारतमा होइन नेपालमै'
पतञ्जलीको जन्मस्थान र संस्कृत भाषाका प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री पाणिनिको कर्मस्थान नेपाल हो। त्यो क्षेत्र अर्घाखाँची र प्युठानको सङ्गमतिर पर्छ। पाणिनिलाई इसापूर्व तीन हजार वर्ष र पतञ्जलिलाई दुई हजार वर...
अब सरकारका कुन मन्त्री फेरिन्छन र नयाँ कसले मौका पाउलान ? भन्ने चाँसो राजनीतिक वृत्तमा मात्रै नभइ नेकपाका नेता, कार्यकर्ता र आम सर्वसाधारणमा समेत बढेको छ । त्यति मात्रै होईन नेकपा पार्टीभित्रै मन्त्री...
Sb Saud 408 0
काठमाडौं । नेपाल सरकारले ल्याएका पछिल्ला विधेयक एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परिरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयक होस् अथवा मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकारसम्बन्धि विधेयक वा गुठी खारेज गर्ने प्रयोजनल...
नेकपाको 'कुट-नीति' : नाक भाँचेको एक करोड, बम पड्‍क...
काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार स्पष्ट बहुमतका साथ सत्तामा बिराजमान छ । लामो संघर्ष र बलिदानपछि मुलुकमा स्थायी सरकारको आगमनसँगै स्थायीत्व,...
DilipKarki 459 0
नेकपाको 'कुट-नीति' : नाक भाँचेको एक करोड, बम पड्‍काउनेलाई पदक
किन सेलायो मिडिया काउन्सिल विधेयकको बहस, प्रश्‍न स...
काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयक सम्बन्धीको बहस अहिले सेलाएजस्तै छ । केही दिन अघि सबै मुलधारका सञ्‍चारमाध्यमका सम्पादक तथा नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवि, स्वतन्त्रताका पक्षधरलगायतका सबै व्यक्ति...
DilipKarki 493 0
Sb Saud 558 0
दरबार हत्याकाण्डका १८ वर्ष : सम्झनामा राष्ट्रप्रेम...
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी राजपरिवारका १० सदस्यको हत्या भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ। २०५८ साल जेठ १९ गते राति तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँगै रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र र निराजन, युवरा...
DilipKarki 540 0
दरबार हत्याकाण्डका १८ वर्ष : सम्झनामा राष्ट्रप्रेमी राजा विरेन्द्र, सिक्नलाई धेरै गुण थिए